Tag: xing raadinta | Martech Zone
Tag: xing raadinta
Haddii aad raadineyso xiriir ganacsi dhammaan shabakadaha bulshada, Google waa aalad aad u fiican. Had iyo jeer waxaan raadiyaa magaca Twitter +, ama magaca LinkedIn + si aan u helo astaan. LinkedIn, dabcan, waxay leedahay mashiin raadin weyn oo gudaha ah (gaar ahaan nooca lacagta la siiyay) sidoo kale waxaa jira goobo sida Data.com ah oo laga helo isku xirnaanta. Badanaa maahan, waxaan adeegsadaa Google inkastoo. Waa bilaash waana sax! RecruitEm waxaa si gaar ah loogu dhisay qorista